HS:-Shir ay maanta iskugu yimadeen Aqoonyahano, waxgarad, Haween iyo dhalinyarada Reer Hiiraan kaas oo looga hadlayey arimo dhowr ah ayaa lagu Qabtay Magaaladda Muqdisho.
Shirkaan ayaa waxaa siweeyn loogu Jeexjeexay Qodobo muhiim ah bulshada Hiiraan kuwaasi oo ay kamid yihiin qodobadaan soo socda:-1. Hiigsiga maamul u sameynta Gobolka Hiiraan 2. Nabadaynta iyo dib u heshiisiinta reer Hiiraan dhaxmarta3. Dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale ee Gobolka Hiiraan. Iyo kuwo kale.
Kulankaasi ayaa waxaa ka hadlay Ogaasyo, siiyaasiyiin,Waxgarad, Colimadda iyo Haweynka kuwaasi oo sheegay amaba ku nuux nuuxsaday in shirkaan uu yahay mid muhiimad gaar ah u leh Bulshada ku dhaqan gobolka Hiiraan iyo sidii loo sameyn lahaa maamul goboleed, iyadoo ay sheegeen in xiligaan shacbiga Soomaliyeed ay Cagta saareen dhisashadda maamul goboleedyo, Reer Hiiraana ay bulshadaasi ka mid yihiin una diyaar karoobaan sidii ay deegaankooda ugu dhisan lahaayeen maamul goboleed.
Intaa kadib ayaa gunaanadkii shirka waxaa ka soo baxay dood iyo falaqayn dheer kadib baaq ku wajahan dhamaan dadka dega dhulweynaha Hiiraan ee walaalaha ah iyo dowlada federaalka, waxaana laga soo saray qodobadaan baaqa ah:
1. Waxaa loogu baaqayaa dhamaan bahwaynta reer Hiiraan sida siyaasiinta, aqoonyahanada, culimada , haweenka iyo dhalinyarada in ay ka soo qayb galaan shirka wadatashiga iyo aayo katalinta dhulweynaha Hiiraan :2. Dadka reer Hiiraan in ay ka tashtaan aayahooda siyaasadeed, dhaqaale iyo deegaan intaba, si loo gaaro siyaasad mideysan oo horseeda xasilooni iyo horumar.
3. Dhamaan qurba joogta reer Hiiraan meel kastoo ay jogaan in ay kasoo qayb galaan dadaaladaan
Lagu dhisayo mustaqbalkooda siyaasadeeed oo aysan ku halleyn aayahooda dad gaar ah.
4. In wada shaqeyn toos ah ay dhex marto dhamaan bulshada reer Hiiraan meel kasta oo ay joogaan. Ayna ka tashadaan aayahooda siyaasadeed iyo sidii loo dhisi lahaa maamul loo dhanyahay. 5. In reer Hiiraan meel kastoo ay joogaan ka shaqeeyaan dib u hishiisiinta walaalaha dega amab aku wada nool dhulweynaha Hiiraan.
6. In dadka reer Hiiraan soo dhaweeyaan, taageerayaasha shirkan wadatashiga oo loogu arinsanayo aayaaha gobolka Hiiraan. 7. In talada gobolka ay ka go’do dadkiisa oo wadajir ah sida ay cuqaasha Hiiraanba horey u sheegeen.
8. Qodobka 8aad ee baaqan waxuu ku baraarujinayaa dowladda federaalka Soomaliya in ay tixgeliso, kadibna taageerto rabitaanka dadka bulshada Hiiraan ayna ku hagto habka ay rabaan shacabka iyo in maamul goboleedkooda ay iyagu dhistaan kaalinta kaka aadana ka soo baxdo DF.
Shirkaasi ayaa waxaa uu ku soo gabagaboobay sidii loogu talagalay.ma ahan markii ugu horeysay
oo ay qeybaha kala duwan ee bulshada Hiiraan fariin cad u diraan masuuliyiinta dowlada federalka iyagoo si toos ah iyo si dadban ugu sheegaya rabitaankooda.
Dhawaan ayey aheyd markii ay qurbajoogta Hiiraan soo dhaweyeen gogosha ay magaalada Belet Weyne dhigeen cuqaasha Hiiraan taasi oo loogu baaqay iney ka soo qeybgalaan dhamaan bulshada Hiiraan waxaana sida muuqata shirkaan Mogdishu ka dhacay iskugu yimid jaaliyada Hiiraan ee Mogdishu dhamaane markaad shirarka ay iskugu imaanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada Hiiraan meelkasta oo ay joogaan aragto kuu soo baxeyso iney isku aragti ka yahiin halka uu ku danbeyn doono mustaqbalka Hiiraan oo sida muuqata ay ka godo reer Hiiraan.
Isku soo duuboo hadii aad tahay aqoonyahan reer Hiraan ah uuna damac kaka jiro inaad hogaamiyo mustaqbalka bulshada Hiiraan hadaad qurbaha ku nooshahay isku diyaari sidii aad u mari laheyd doorasho mustaqbalka iyo sidii aad taageero uga heli laheyd bulshada siiba cuqaasha iyo golaha deegaanka ee mustaqbalka uu yeelan doono maamul goboleedka Hiiraan.
Sidoo kale hadii aad tahay siyaasi aqli badan ku dadaal in uu ololahaadu noqdo rabitaanka shacabka maadaama sida muuqata reer Hiiraan u soo jeesteen sidii ay dhulkooda ugu dhisan lahaayeen maamul goboleed u gaar ah kaasi oo hoostagaya dowlada dhexe.
Warar hada inaga soo gaaraya magaalada Mogdishona waxey sheegayaan in ay siyaasiyiinta reer Hiiraan ugu jirta dowlada dhexe siiba xildhibanada iyo wasiirada reer Hiiraan durbaba xiriir la sameeyeen cuqaasha Hiiraan halka maamulka uu waqtigiisa dhamaaday ee ku sugan Hiiraana firka siyaasiyiinta dowlada dhexe ay iyaguna aaminsan yahiin dhawaana ay qaban doonaan shir ay arintaan ku taageerayaan si kedibna looga qeybgalo dal iyo dibad shirweyne ay reer Hiiraan iskugu yimaadaan kaasi oo ka dhici doona Hiiraan.
· admin on February 20 2015 15:41:01 · 0 Comments · 3204 Reads ·
14,666,186 unique visits